⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Iphupha elitofotofo laseCalifornia kumasango eParis
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguDavid
Villa ZOBUNGANGAMELA ihlale nembono ezizodwa ze-Seine kunye iziko, kuba Ngomkhukula sihlangane abahlobo okanye usapho, Evjf, Evg, yokuzalwa zokuba malunga abamelwane, i-Music anqongophele ngenxa ebiyelweyo ophezu site (ubukhulu becala eyaneleyo) akukho DJ iinkqubo zesandi ezinokwenzeka okanye ezongezelelweyo.
Indlu enkulu ibekwe elunxwemeni lweSeine kwindawo ezolileyo nenoxolo ilungele ukutshaja iibhetri zakho kunye nokwenza imisebenzi yolwandle kwindawo enoxolo.
Yonke into ibicingwa ukuba iza kuchitha ixesha eliqinisekileyo kunye namaxesha amnandi obomi!
kukho indawo yomlilo kwigumbi lokuhlala.
Yenziwe ngumhombi uDädou, @latelierdedadou (kwi-Insta)
I-villa enamagumbi ama-4, Igumbi lokungena lokunxiba, igumbi lokuhlambela, igumbi lokuhlala, iveranda, ikhitshi, igumbi lokulala elikhulu elinegumbi lokuhlambela, igumbi lokulala le-2 elineebhedi ezili-10 kunye nomgangatho ophantsi wegadi yasebusika eyi-80m2 enekhitshi yebha.
amaxabiso evekini ngabantu abali-14, uneendwendwe zomhla wokuzalwa okanye ulwamkelo oluncinci, ikliphu, ukudubula ndiya kukunika isicatshulwa somntu ngesicelo.
Utshintsho oluqinisekisiweyo lwendawo kwi-100% umoya waseCalifornian! Uya kuntywiliselwa kwindawo ejikelezwe buhlaza kunye neenyawo zakho emanzini. Ngombono ophefumlayo weSeine, yiza uphumle kwindawo ezolileyo ekufutshane nendalo nje iikhilomitha ezingama-45 ukusuka eParis.
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-R18188
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Morsang-sur-Seine